Soo-saareyaasha Sheybaarada & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshad Sheybaarka Shiinaha
CON500 Tabinta / TDS / Salinity Meter-Benchtop
Naqshad jilicsan, isafgarad leh iyo bini'aadanimo, keydinta boos. Qalabayn fudud oo dhakhso leh, sax ahaanta ugu habboon ee Habdhaqanka, TDS iyo cabbiraadda Salinity, hawlgal fudud ayaa la yimaada iftiin iftiin sare leh oo qalabka ka dhigaya lamaane cilmi baaris ku habboon shaybaarada, dhirta wax soo saarka iyo dugsiyada.
Hal fure oo lagu xisaabiyo laguna aqoonsado otomaatig si loo dhammaystiro nidaamka sixitaanka; interface bandhig cad oo la aqrin karo, waxqabadka faragelinta kahortaga, cabirka saxda ah, hawlgalka fudud, oo lagu daray iftiinka iftiinka iftiinka sare;
DO500 Kala Baxay Oxygen Meter
Naqshad kooban oo aad u fiican, keydinta booska, saxnaanta ugu habboon, hawlgal sahlan ayaa la yimaada iftiinka iftiinka sare. DO500 waa xulashadaada cajiibka ah ee codsiyada joogtada ah ee shaybaarada, dhirta wax soo saarka iyo iskuulada.
Naqshad kooban oo qurux badan, keydinta booska, halbeeg fudud oo leh dhibco lagu hagaajiyay oo la soo bandhigay, saxsanaanta ugu habboon, hawlgal fudud ayaa gadaal ka shidan. PH500 waa lammaanahaaga lagu kalsoonaan karo ee codsiyada joogtada ah ee shaybaarada, dhirta wax soo saarka iyo iskuulada.
Sensor-ka Electromagnetic, Waxqabadka TDS Sensor, Feeraha Dareeraha Fududeeyaha, Chlorophyll Sensor, Dareeraha Dareemida Isukeenista Daawaha Titanium, Quadrupole Shaxanka Samaynta Iskuduwaha Sawirka,